IGermany, igama layo elibizwa ngeFederal Republic of Germany emithonjeni esemthethweni, yamukele isimo seFederal Parliamentary Republic kanti inhlokodolobha yayo iBerlin. Uma kubhekwa inani labantu, inani eliphelele labantu ezweni, elilinganiselwa ku-81,000,000, likhonjiswa njengama-87,5% ezakhamizi zaseJalimane, 6,5% wezakhamizi zaseTurkey kanye no-6% wezakhamizi zezinye izizwe. Izwe lisebenzisa i-Euro € njengemali yalo futhi ikhodi yezingcingo yomhlaba wonke ingu-49.
Ngemuva kweMpi Yezwe Yesibili, izifunda zaseMelika, eBrithani naseFrance zabumbana kanye neFederal Republic of Germany, eyasungulwa ngoMeyi 23, 1949, kanye neGerman Democratic Republic, eyachazwa njengeMpumalanga Jalimane futhi yasungulwa ngomhlaka 7 Okthoba 1949 , wahlanganisa futhi wakha iFederal Republic of Germany ngomhlaka 3 Okthoba 1990.
IJalimane izwe eliseYurophu Ephakathi. IDenmark enyakatho, i-Austria eningizimu, iCzech Republic nePoland empumalanga, neNetherlands, iFrance, iBelgium neLuxembourg entshonalanga. Ngasenyakatho yezwe kukhona uLwandle lwaseNyakatho noLwandle iBaltic, kanti ngaseningizimu kunezintaba ze-Alpine, lapho indawo ephakeme kunazo zonke ezweni yiZugspitze. Uma kubhekwa ukuma kwezwe jikelele kweJalimane, kuyabonakala ukuthi izingxenye eziphakathi nendawo zinamahlathi kakhulu kanti namathafa ayanda njengoba siya ngasenyakatho.
Isimo sezulu sipholile ezweni lonke. Imimoya yasentshonalanga enomswakama nemisinga eshisayo evela eNyakatho ye-Atlantic kuthonywa yisimo sezulu esiphansi. Kungashiwo ukuthi isimo sezulu sezwekazi sisebenza kangcono njengoba uya engxenyeni esempumalanga yezwe.
IJalimane yizwe elinenhlokodolobha eqinile, umnotho wemakethe yezenhlalo, abasebenzi abanamakhono amaningi namazinga enkohlakalo aphansi kakhulu. Ngomnotho wayo oqinile, singasho ukuthi iYurophu ingeyokuqala kanti umhlaba ungowesine. I-European Central Bank ezinze eFrankfurt ilawula inqubomgomo yemali. Uma ubheka izindawo ezihamba phambili zezimboni ezweni, imikhakha efana nezimoto, ubuchwepheshe bolwazi, insimbi, ikhemistri, ukwakhiwa, amandla nezokwelapha kuyabonakala. Ngaphezu kwalokho, izwe liyizwe elicebile elinemithombo efana ne-potassium iron, ithusi, amalahle, i-nickel, igesi yemvelo kanye ne-uranium.
# Isimo sendawo
# Isimo sezulu